maps | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
ဘတ်စ် ကားစီး လမ်းညွှန်
ဒီတခေါက်တော့ အသစ် ထွက်လာတဲ့ bus လမ်းညွှန် Apk လေး တခု တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာက စထွက်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ ဆုံးမယ် ဆိုတာ တွေကို မသွားခင် တွက်ပြီး ဘယ်ကား စီးရ မလဲ ဆိုတာ ရွေးစီးလို့ ရတာပေါ့နော် အခုမှ ရန်ကုန် လာမယ့် လူတွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေ ပါတယ်။
ကား မစီးတတ်လို့ သူများတွေကို မေးရတဲ့ ဒုက္ခ ကနေ လွတ်ချင် ရင်တော့ ဒီ software လေးကို ယူထား လိုက်ပါနော်
အသုံးပြု ချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
ကဏ္ဍ Android, maps, Phone Application
SoftOnPc Universal Maps Downloader 7.316
SoftOnPc Universal Maps Downloader 7.316 | 2.12 MB
Universal Maps Downloader isatool that help you to get small tile images from google maps, yahoo maps or microsoft maps.
The downloaded images are only for your personal purpose, non-commercial use.
Home Page : www.softonpc.com
ကဏ္ဍ Download-Manager, maps
Getallmaps Offline Map Maker 5.13 | 2.21 MB
All downloaded offline images are saved on your disk.
You can view downloaded offline map by Offline Map Viewer.
And you can zoom out or zoom in the offline map, or output the offline map asa.BMP file withaworld file xxx.bpw, and can outputaxxx.map file for OziExplorer.
Home Page : http://www.getallmaps.com/omm/index.html
DeskSoft EarthTime 4.5.11 Full Version Free Download
DeskSoft EarthTime 4.5.11 | 5.72 MB
Home Page www.desksoft.com
Download DeskSoft EarthTime 4.5.11 ( 5.72 MB )
ကဏ္ဍ Desktop, maps, widget
သင့် Company လိပ်စာအား Google Map မှာ ထည့်သွင်းခြင်း
ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Google Map ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်း လိပ်စာ ထည့်
Google ဆိုသော Search Engine ကြီးဆိုတာ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံတည်း တင်မဟုတ်ပဲ တစ်
ကမ္ဘာလုံးက သုံးစွဲ နေကြ တာပါ.. ဒီလို ကမ္ဘာနှင့် တလွှား သုံးနေ ကြတဲ့ Google Search
Engine ကနေ တဆင့် ခွဲထွက်ထားသော Google Map Services ဆိုတာ ကလည်း တစ်
ကယ်တမ်း အသုံးပြု ကြတာ ကတော့ မိမိ သိချင်တဲ့ မြေပုံတွေ လမ်း လိပ်စာတွေ လုပ်ငန်း
လိပ်စာ တွေကို အလွယ် တကူ အသေး စိတ် Traffice Route, Settelite Route, Map
Route စသဖြင့် အသေးစိတ် ဖော်ပြမှု တွေနှင့် အတူ သင်ရှာ လိုသော လုပ်ငန်း လိပ်စာ၊
တည်နေရာ၊ စတာတွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေလို့ ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း လိပ်စာတွေကို ဒီ
Google Map ထဲမှာ နေရာ အသစ်ထည့် ထားခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်း လိပ်စာရဲ့ တည်
နေရာတွေကို Internet မှတဆင့် အလွယ်တကူ ရှာဖွေလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ .... စလိုက်ရအောင်...။
အရင်ဆုံး Browser ရဲ့ Address Bar မှာ
www.google.com/mapmaker လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့
သင့် Mail Account ကို အရင် Sign In လုပ်လိုက်ပါ။
ဒီနောက် အထက်ပါ ပုံအတိုင်း သင်ထည့်မည့် သင့်လုပ်ငန်း လိပ်စာအား အရင်ဆုံး
Search Box အတွင်း အနီးစပ်ဆုံး ရှာဖွေပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ ထို့နောက်မှာ
တော့ သင်ရှာဖွေလိုက်တဲ့ လိပ်စာက အောက်ပါ အတိုင်းပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်။
ဒီအခါမှာ သင်က သင့်လုပ်ငန်း နေရာကို မြေပုံမှာ ထည့်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သင့်
လုပ်ငန်း လိပ်စာရှိတဲ့ နေရာကို Pointer လေးကို ဆွဲရွှေ့သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီနေရာ
မှာ တစ်ခုပြောချင်တာက အရင် ပုံမှန်အတိုင်း Map ရှာသလိုမျိုး Mouse ကို ဖိပြီးရှာလို့မ
ရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ သင့်ရဲ့ Click တစ်ချက်က သင့်လုပ်ငန်း နေရာကို
သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် Pointer လေးကိုသာ ရွှေ့သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနောက် သင် Add လုပ်မယ့် သင့်လုပ်ငန်း လိပ်စာနေရာကို တွေ့ပြီဆိုရင် မျှားအနီလေးပြ
ထားတဲ့ နေရာက Add New ကို အရင်နှိပ်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ AddaPlace ဆိုတာကို
ထပ်နှိပ်ပါ။ ဒီနောက်မှာတော့ သင့်လုပ်ငန်း နေရာအတိအကျကို Click ထောက်လိုက်ပါ။
ဒီလိုထောက်ပြီး သွားပြီ ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ ပုံအတိုင်း တက်လာ ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ လုပ်ငန်း အမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ပေးရတဲ့ အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်စိတ်ကြိုက် သတ်မှတ်ပါ။ ထိုနောက် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း
သင့် လုပ်ငန်း အမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ပေး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးသွားရင်တော့ Continue
ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒီနောက် Add Place လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် Loading ဆွဲနေ
ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးသွားရင်တော့ အောက်ပါပုံအတိုင်း
ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် သင့်လုပ်ငန်း အတွက် လိုအပ်သော Data များကို ဖြည့်စွက်ပေးရမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက် များကို ဖြည့်စွက်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ Save ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခါတစ်လေ Error ပြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အခုလက်ရှိ နာမည်နဲ့ Add a
Place လုပ်လို့ မရဘူးဆိုပြီး ပြပါတယ် အပေါ်နားလေးမှာပေ့ါ။
အဲဒီ Message မှာပဲ Skip လုပ်တဲ့ Check Box လေး ရှိပါတယ် အဲဒီကောင်လေးကို အမှန်
ခြစ်လေးခြစ်ပေးပြီးတော့ ထပ်မံ Save လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ AddaPlace လုပ်ပြီး
သွားလို့ အောက်ပါ အတိုင်းပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်။
သင့် လုပ်ငန်းကို Google Map Services ကနေ အတိအကျ ရိုက်ပြီး ရှာဖွေတဲ့ အခါမှာလည်း
အောက်ပါ ပုံအတိုင်း ဖော်ပြနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ထပ်ပြီး Zoom ဆွဲကြည့်တဲ့ အခါ နေရာလွဲ နေသေးပါက A ဆိုတာလေးကို Click
ထောက်ပီး မိမိစိတ်ကြိုက် နေရာသို့ Drag ဆွဲသွားလို့ ရပါတယ် အောက်ပါ ပုံအတိုင်ပေါ့။
ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ Continue ကိုသာ နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် သင့်လုပ်ငန်း နာမည်နဲ့ လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရမယ့် အချက်အလက် တွေက Google
Map ပေါ်ရောက်ရှိ သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ ယုံကြည် မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - ဦးဇာနည်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, January 23, 20144comments:
ကဏ္ဍ Google, maps, နည်းပညာ, လမ်းညွှန်